Archive du 20180423
Fitondrana HVM mihosin-drà Hirodana raha tsy milefitra
Efa nampoizina ihany ny hisian’ny fifandonana sy ny sakoroka teny Analakely ny andron’ny sabotsy lasa teo. 17 ireo naratra, 2 no maty, ny 2 efa nody, ary ny 13 mbola arahi-maso, raha ny tatitra nataon’ny hopitaly HJRA tamin’ny alalan’ny Pr Rantomalala. Nalaza fa nisy ny zaza roa maty tao amin’ny hopitalin’ny zaza ao Tsaralalana, saingy nilaza io profesora nanao ny fanambarana io, fa tsy nisy ny namoy ny ainy tao. Nafana ny fifandonana ary miitatra amin’ny fialan’ny filoha ny fitakian’ny depiote noho ny rà mandriaka sy faty olona.
Hery Rajanarimampianina Mbola mandrahona ihany
Nosokajian’ny filoha Hery Rajaonarimampianna ho fanonganam-panjakana ny hetsika notarihan’ireo solombavambahoaa TIM sy MAPAR ny sabotsy 21 aprily lasa teo teny Analakely.
Solonandrasana Mahafaly sy Rivo Rakotovao May volon-tratra ka mody mandamin-dresaka
Amin’ny anaran’ny filoham-pirenena, amin’ny anaran’ny governemanta, ary amin’ny anaran’ny tenako manokana no hitondrako eto ny teny fampiononana ho an’ny fianakaviana mana-manjo, ary mirary fahasitranana ho an’ireo maratra, hoy ny Praiminisitra somary hafahafa endrika tsy toy ny fahitana azy mahazatra ny sabotsy alina teo.
Vondrona Eoropeanina Manan-jo haneho hevitra ny olona
Manara-maso akaiky ny toe-draharaha eto Madagasikarra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka, tsy efa fa omaly ihany dia efa namoaka fanambarana momba ny zava-nitranga teny Analakely ka nahafatesana sy naharatrana mpanao fihetsiketsehana ny Masoivoho Amerikanina sy ny vondrona eoropeanina.
Olon’ny HVM Manomboka mitsoaka any ivelany ?
Nifanesisesy ny fivoriana isan-tsokajina nandritra ny faran’ny herinandro iny , izany hoe ny sabotsy sy ny alahady, ka ireo tompon’andraikitra sy olom-boafidy ao anatin’ny fitondrana no tena nivory.Anisan’izany ireo solombavambahoaka HVM, ary re fa nisy ny tsy fitovian-kevitra niteraka fifamaliana mihitsy nandritra izany.
Fampihavanam-pirenena Soa fianatra ny an’ny TIM sy MAPAR
Firehana tsy mitovy, fomba fijery samihafa kanefa mahay manavaka ny hambom-pony sy ny fomba fijeriny ireo depiote TIM sy MAPAR.
Tolom-bahoaka teny Analakely Tokony nisy fifampiresahana, hoy Rafanomezantsoa Jean Nirina
Naneho ny heviny mikasika iny zava-nitranga teny amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely ny sabotsy teo iny ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Mila anao ny aty ee
Manao ahoana ianao izay ry Jean ? Ny aty an-tanàna rangahy ity mamay be aa!! Fa ianao io aiza ee!? Jean kosa ee!! Mila anao anie ny aty ee!
Tsy voafehy intsony ny firenena Miantso ny tafika sy ny FFKM, ny K3F
Nanao fanambarana lehibe tao amin’ny Sekoly Saint Michel Amparibe ny K3F (Komitin’ny Fahamarimanana Fandriampahalemana Fiadanana) omaly manoloana ny zava-niseho teny Analakely ny sabotsy 21 aprily teo.
Kianja sentetika Vontovorona Montsan’ny CNaPS Sport 9-1 ny A.E Ramassa
Montsan’ny CNaPS Sport Madagasikara 9-1 ny A.E Ramassa ekipa diviziona faha-3 avy any Espagne omaly alahady 22 aprily teny amin’ny kianja sentetika teny Vontovorona, tamin’ny lalao baolina kitra ara-pirahahiana hoan’ny Tanjon’ny Fampandrosoana Lovain-jafy faha-16.
Jeux Corporatifs "Lalaon'Iarivo" Samy nibata amboara 3 avy ny CNaPS sy ny Meeh
Tontosa ny sabotsy 21 sy omaly alahady 22 aprily 2018 teny Mahamasina ny Jeux Corporatifs “Lalaon’Iarivo” andiany voalohany nokarakarain’ny Kaominin’Antananarivo-Renivohitra. Ireto avy ny ekipa nibata ny amboara :
Basket Tompondaka rejionalin’Analamanga Lavon’ny Dream Team Analamanga ny Ecbba Atsimondrano
Noho ny praograman’asa voasoritry ny ligy izay tantanako amin’ny fanatanterahana ny fanapariahana ny lalao basikety any amin’ny seksiona manodidina, hoy ny filohan’ny ligin’ny basikety eto Analamanga, Rasolomalala Fidy,
Loza ity! Niseho indray iny ny rà mandrika sy ny korontana noho ny adilahy politika.
Fidiran’ny mpianatra amin’ny novambra Tsy misy atahorana na dia propagandy aza, hoy ny ministera
Niteraka fanehoan-kevitra maro tao anatin’ny tambajozatram-pifandraisana facebook ny faran’ny herinandro teo ny fivoahan’ilay tetiandrom-pampianarana amin’ny taom-pianarana vaovao 2018-2019 ho avy io.
Fampisehoan’ny tarika MAGE 4 Feno ny lapa, nafana ny ambiansy
Fahombiazana tanteraka ny fampisehoana notanterahan’ny tarika Mage 4 tetsy amin’ny lapan’ny kolon-tsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina omaly alahady izay fanamariihana ny faha 25 taona nijoroany.
Hetsika tetsy Analakely Nanararao-paty ny mpangarom-paosy
Tsy kely làlana ny ratsy. Maro hatrany ireo nitaraina ho very entana nandritra ny famoriam-bahoaka tetsy Analakely ny asabotsy lasa teo.
Tsy tokony natokana ho an`ny fitondrana irery ihany ny RNM sy TVM hoy ity mpanao politika ity ary mihevitra ny tenany fa tsy hahafantatra izay mitranga eto an-toerana ny any amin`ny faritany amin`izao fotoana. Isan`ny zavatra tsy nankasitrahiny mihitsy izany hatramin`izay.